Ma rabtaa khubarada YouTube inay si buuxda u qiimeeyaan kanaalkaaga?
HAA, Waxaan rabaa khubarada YouTube inay qiimeeyaan kanaalkayga
Laga bilaabo $ 120
Laga bilaabo $ 30
Laga bilaabo $ 25
Adigoo ka faa'iidaysanaya ka-qaybgalka iyo beddelka awoodda nuxurka fiidyowga, waxaad furi kartaa suuqgeynta sumcadda weyn ee YouTube. Ahaanshaha mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn, madal-wadaaga fiidyaha ee Google-ku leeyahay ayaa kaa caawin karta inaad abuurto magacyo horumarsan...
YouTube waxa ay u soo baxday sidii dhexdhexaad faa'iido badan leh oo lagu dhejiyo oo laga soo galo waxyaabo badan. Abuurayaasha nuxurka waxay qaateen barxadda warbaahinta bulshada sidii hab isgaarsiineed oo xooggan. Ku socodsiinta kanaalka YouTube, si kastaba ha ahaatee, waa…
In kasta oo ay u ekaan karto go'aan yar marka hore, go'aan ka gaarista nidaamka midabka wanaagsan ee kanaalkaaga YouTube waa lama huraan si loo xaqiijiyo guushaada goobta. Midabada waxaa loo yaqaanaa inay si qoto dheer u saameeyaan…
Laxidhiidha + Shakhsiyaynta = Guusha YouTube La macaamilka algorithmiyaha firfircoon ee adag ee YouTube ma aha gabal keega suuq-geeyayaasha. YouTube, kaas oo ku raaxaysanaya isticmaalka in ka badan 2 bilyan, sidoo kale waa kan labaad ee ugu weyn…
Suuqgeynta Fiidiyowga waa mid ka mid ah xeeladaha suuq-geynta ugu caansan uguna muhiimsan ee 2022. Ma jiraan wax la mid ah indhaha soo jiidashada sida muuqaal tayo leh. Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay milkiilayaasha ganacsiga, xirfadlayaasha SEO, iyo suuqgeynayaasha…
Barta adeegsadaha YouTube ee ay leedahay Google-ka ayaa la filayaa in uu gaadho 210 milyan sanadka 2022. Inta badan waxa sabab u ah madadaalada iyo suuqgeynta baaxadda leh ee fiidyaha YouTube. YouTube sidoo kale waa shabakada labaad ee ugu caansan bulshada…
Talooyin ku saabsan socodsiinta wax-bixinnada cajiibka ah ee YouTube-ka si loo soo jiito dhagaystayaal daacad ah
Waqtiyada maanta, soo jiidashada daawadayaasha daacadda ah YouTube iyo sii haynta waxay qaadataa dadaal badan. Xitaa ka dib markaad wax walba geliso, waxaad haysataa, waxaa laga yaabaa inaad wakhti dheer sugto macaamiishaada…
7 Noocyada Surefire Immersive Content Kaas oo kaa caawin kara inaad sare u qaaddo joogitaankaaga YouTube
Haddii aad rabto in aad abuurto nuxur YouTube ka kooban, waxaad joogtaa meesha aad u baahan tahay. Maqaalkan, waxaan ku soo qaadan doonaa toddobo nooc oo kala duwan oo fiidiyowyo immersive ah oo aad u abuuri karto si aad u qaadatid…
Siyaabaha Degdegga ah ee Lagu Helo Ereyada Furaha ee Fiidiyowga Si loo horumariyo SEO-ga YouTube
YouTube waa mid ka mid ah shabakadaha warbaahinta bulshada ee ugu caansan iyo madal hormuudka u ah baahinta fiidiyowyada adduunka oo dhan. Iyada oo ku dhawaad ​​2.29 bilyan isticmaaleyaal firfircoon bishiiba, YouTube waa barta labaad ee ugu caansan warbaahinta bulshada kadib…